Great Lake Lake, amin'ny fanjakan'i Utah | Vaovao momba ny dia
Etazonia dia firenena manan-karena amin'ny tontolo iainana, misy fifanoheran-kevitra maro ary toerana sy fisehoan-javatra mahaliana, toa ilay iarahantsika ankehitriny. Ary amin'ity lahatsoratra ity dia hahafantatra bebe kokoa isika ny Farihy Lehibe MasiraTsy noho izy malaza, dia tsy fisehoan-javatra voajanahary tsy mahazatra intsony izay mitranga any amin'ny faritra sasany amin'izao tontolo izao.
Ny Great Lake Lake dia ny sisa amin'ny Lake Bonneville taloha, fatran'ny rano be fatratra izay nisy farafaharatsiny 15 arivo taona lasa izay, ary saika nanarona ny faritanin'i Utah manontolo, ary ny ampahany amin'i Idaho na Nevada. Tsy mahagaga raha ny renivohi-panjakana ao Utah, Salt Lake City ary ny faritra an-tanànany, izay misy olona mihoatra ny iray tapitrisa, dia eo amin'ny farafaran'ity farihy tranainy ity, voahodidin'ny Lake Lake ankehitriny sy ireo tandavan-tendrombohitra avo sasany, izay mahatonga azy hanana toetrandro somary sarotra.
Ny haavon'ny haavon'ity farihy ity dia noho ny ny rano tsy misy outletTsy amin'ny filtration akory, toy ny any amin'ny Ranomasina Caspian, ilay lehibe indrindra amin'ny ranomasina masira, na ny Ranomasina Maty, angamba no malaza indrindra. Apetraka ny sira, mamorona te hahafanta-javatra tany efitra fotsy maloto. Toy ireo toerana ireo, ny index buoyancy dia avo dia avo fa tsy toerana tsara ho an'ny biby an-dranomasina. Mazava ho azy fa ny zanatany manan-danja amin'ny vorona dia miara-miaina eto ary misy antilopa maro koa Valan-javaboary Antelope Island.
Ity nosy ity, iray amin'ireo katalaogy maro ao anatin'ity farihy ity, dia iray amin'ireo manintona voajanahary tsara an'ity toerana ity sy ao amin'ny tanànan'i Salt Lake. Ny Great Lake Lake dia toerana mety indrindra ho an'ireo izay maniry izay fanatanjahan-tena mifandraika amin'ny sambo, toy ny sambo, lakana na kayak, ary ny volana fahavaratra no fotoana mety indrindra hahalalana ity toerana ity sy ny tanàna teraka teo am-pototrany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ocio » The Great Salt Lake, Utah
Parnu, fizahantany amoron-dranomasina any Estonia